Tilmaame loogu talagalay shahaadada kombuyuutarka ee Windows: MCSA, MCSE iyo MTA | ITS
Hagaha Bilowga ee loogu talagalay Shahaadada Server-ga ee Server-ka: MCSA, MCSE iyo MTA
Tilmaame loogu talagalay shahaadada Windows Server MCSA MCSE iyo MTA
Muujinta dhibicda maareynta barnaamijka shahaadeynta ee Microsoft oo ku saabsan jihada horumarka ee shuruudaha shaqada. Dhibaatooyinka xiisaha leh waxaa loo qoondeeyey si qoto dheer leh. Waa in la fahmo waxaa jira shahaado badan oo Microsoft ah oo laga heli karo suuqa. Xafiisyada Microsoft Xafiisyada waxaa loogu talagalay codsiyada iyo sidoo kale miisaska, barnaamijyada horumarinta iyo database.
Tilmaamahan dhammaan shahaadooyinka heerarka Microsoft ee aad ka heleyso Shahaadada MCSA, Shahaadada MCSE, Shahaadada MTA. Barnaamijyadan shahaadaynta ee Microsoft oo dhan ayaa lagu kalsoonaa sanadaha oo dhan waxaana loo soo jeestay inay noqdaan shahaadooyin aad u sareeya. Microsoft wuxuu ka dhigayaa maamulayaasha, kooxaha baarista iyo kooxaha taageerada dhammaan sheyada iyo codsiyada laga heli karo Microsoft.
Asal ahaan, waa inaad fahamtaa in hoos Aqoonsiga MCP, loo yaqaan MCSA, MCSE iyo shahaadooyinka takhasuska gaarka ah ayaa ogaaday. MOS ama imtixaanka MTA ma hoos tagaan tagsiga MCP tag. Cusboonaysii in aysan jirin imtixaanno loo baahan yahay kuwaas oo loo tixgelinayo daruuriyaadka loo baahan yahay ee loogu talagalay caqabadaha laga hadlaayo kor ku xusan.
Fahminta dhammaan imtixaannada
Shaxda Microsoft Certific Certific MTA, MCSE iyo MCSA Aqoonsiyada. Gudaha MTA Server waxaa soo galaya shahaadooyin loo yaqaan 'Infrastructure IT'. Si aad u hesho isku mid ah, rajo waa in aad ka gudubto imtixaan keli ah oo shan ah. Mawduucyadan iyo mawduucyada sida aasaaska maamulka maamulka, nidaamyada nidaamka, farbarashada iyo qalabyada, Daruuriga iyo amniga.
Iyada oo tracked MCSA Server, waxaa ka imanaya Windows 2008, 2012 iyo 2016 server. Raadyadan Windows Server waxay u baahan yihiin saddex imtixaan mid kasta. Noqo sidaad u malayn lahayd, waxaad u baahan tahay laba imtixaan oo kaliya ee Linux ku saabsan shahaadada Azure iyo MCSA: Platform Platform. Mid kasta oo ka mid ah kuwan waxay u muuqdaan inay muhiim u yihiin xiga. Habka caddaynta ee Microsoft waxay ku lug leedahay MCSA, MTA iyo MCSE. MTA Database wuxuu u baahan yahay hal imtixaan. Xogta MCAS Database, kuwani waa MCSA: SQL Server 2012 / 2014 iyo MCSA: SQL 2016. Waxay u baahan yihiin saddex imtixaan.
Certificate MCSA Desktop ayaa ku jira hal shahaado oo loogu talagalay Windows 10 sida lagu dhawaaqay Janaayo 2017. Si aad u hesho MCSA: Windows 10 waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku gudubto imtixaano yar.
MCSA Apps track waxa ay ku jiraan hal shahaado - si gaar ah, MCSA: Xafiiska 365. Imtixaanno dhawr ah ayaa la filayaa inay arrintaani helaan. Microsoft wuxuu bixiyaa MOS Office 2016 caddayn kasta oo Xafiiska. MOS 2016 Cert Cert ayaa aqoonsanaysa kuwa haysta dusha sare ee Xafiiska khadka. Dhalliyeyaashu waxay u baahan yihiin inay afartan tijaabiyaan. MOS 2016 Master wuxuu u baahan yahay sixidda imtixaan.
Shahaadooyinka Microsoft Server waa kuwo ku haboon xirfadlayaasha IT-da ee la xidhiidha dejinta, dejinta, dejinta ama maaraynta xaaladaha Windows. Tani waxay ku darsan kartaa miisaska iyo xitaa qalabyada. Kuwa haysta xarumaha MS waxay buuxinayaan macaamil, madax, falanqeeye iyo wixii la mid ah.
Muddadii, shahaadada MCSA, shahaadada MCSE iyo shahaadada MTA ayaa sii kordhaysay qadarinta iyo tamarta. Shakhsiyaadka raadinaya MCSA ee isku diyaarinaya ama koorsada MCSA iyo Tababarka Microsoft waxay la xiriiraan barnaamijyada sida Xafiiska 365, Xafiiska iyo Microsoft Dynamics 365.
Ilaa March March 31 sannadkan, MCSE Server wuxuu raacay SharePoint, Isgaadhsiinta, Xayeysiisyada Gaarka ah, Darawaladda Daruuriga ah iyo Kaabayaasha, Macmiilka iyo Kaabayaasha Xogta ee Kaabayaasha Server, Kumbuyuutarka Meelaha iyo Meelaha Gaarka ah ee aad u baahan tahay inaad soo bandhigto MCSA: Windows Server 2012.
Wixii Qorsheeynta, Isgaadhsiinta iyo Qorshaha SharePoint waa inaad ku qaadataa MCSA Xafiiska 365 Xafiiska. Waa inaad u qalantaa inaad tagto iyada oo aan ka yareyn labadii imtixaan oo kala duwan si aad ugu guuleysatid shahaadada MCSE Server. Qaybta macluumaadka MCSE waxay leedahay sadex xabbadood oo ku saabsan bixinta. Mid ka mid ah shahaadada ugu dambeysay waa MCSE: Maareynta Macluumaadka iyo Falanqaynta, weli laba ka horeeya waa MCSE: Hantida Ganacsiga iyo MCSE: Istaraatiijiyada Macluumaadka. Baahida ugu dambeysa ee soo-xulashada waxay u baahan tahay afar imtixaan. Qalab badan oo xawaare ah ayaa u baahan 5 imtixaan. Labada shahaadadood ee hore waxay dib ugu laabteen si ay ugu deeqaan MCSE: Maareynta Macluumaadka iyo Analytics.
Shirkadda Microsoft Desktop waxay la socotaa MTA, shahaadada Microsoft iyo aqoonsiyada MCSA. Khabiirka Microsoft ee 10 ayaa ka filan doona mid si loo baadho imtixaannada. Habka MTA Desktop wuxuu leeyahay shahaadooyin keli ah oo loogu talagalay Infrastructure IT. Tani waa isku mid sida MTA Server track waxaan baarnaa kaliya ka hor. MTA IT Infrastructure Track waxay u baahan tahay inaad ku gudubto imtixaan keli ah oo shan ka mid ah. Imtixaanadu waxay ku jiraan nidaamka nidaamka, u-qaadista, maamulka Windows-ga, kala-duwanaanta, iyo aasaaska dariiqooyinka iyo dariiqooyinka.
Qorshaha Microsoft ee habka loo yaqaan 'Developer Cert' ayaa raacaya qalabka MCSD iyo MTA. Xeerka MTA ee MTA wuxuu aqoonsanayaa kuwa ku jira heerka qaybta sida barnaamijyada horumarinta. Shahaadadani waxay u baahan tahay tartan si loo helo mid ka mid ah saddexda imtixaan. Meelaha ay u badantahay waa HTML5 aasaas u sameynta codsiyada, horumarinta barnaamijka iyo aasaaska barnaamijyada imtixaanka.
Qaar ka mid ah Mudanayaasha la xiriira
Tilmaamaha dhammaystiran ee shahaadada MCSA 2016
Shahaadada MCSE - Dhamaan Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Dib u bixinta Waraaqaha Hubinta Software ee Microsoft (VIS)